होमफिटलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने NFC ट्यागहरू मार्फत आईफोन समाचार
एनएफसी ट्यागहरूको साथ होमकिट कसरी नियन्त्रण गर्ने
आईओएस १ ले हामीलाई धेरै नयाँ संभावनाहरू प्रदान गर्दछ, र ती मध्ये एकले एनएफसी ट्यागहरू प्रयोग गरेर हाम्रो होमकिट यन्त्रहरू नियन्त्रण गर्न सक्षम भइरहेको छ। यी स्टिकरहरू अन्तहीन चीजहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, र केवल हाम्रो आईफोन तिनीहरूलाई नजिक ल्याएर हामी हाम्रो बत्तीहरू बन्द गर्न सक्दछौं, हाम्रो बस्ने कोठामा संगीत बजाउन दिनुहोस् वा हामी हाम्रो घरको डेमोटिक्ससँग सम्बन्धित सोच्न सक्ने सबै कुरा।
धन्यवाद केहि साधारण एनएफसी ट्यागहरू, हाम्रो आईफोन र सर्टकट अनुप्रयोग तपाईंले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ मैले भिडियोमा तपाईंलाई देखाउँछु र अधिक धेरै। यदि तपाईं आफ्नो आईफोन र तपाईंको होमकिट सामानबाट अधिक पाउन चाहनुहुन्छ भने, भिडियोमा हामी यी कार्यहरू कसरी कन्फिगर गर्ने भनेर चरण-चरण वर्णन गर्दछौं।
एनएफसी ट्यागहरू साधारण स्टिकरहरू जस्तो देखिन्छ, तर ती भित्र चिप समावेश छ जसले तिनीहरूलाई विशेष शक्ति दिन्छ। आईफोनले लामो समय सम्म एक एनएफसी रिडर सामेल गर्यो तर यो बन्द थियो र एप्पल पे बाहेक अरू केहि प्रयोग गर्न सकिदैन। आईओएस १ From बाट हामी त्यस पाठकको अधिकतम प्रयोग गर्न सक्नेछौं र ती एनएफसी ट्यागहरूसँगै आफ्नै कार्यहरू सिर्जना गर्न सक्षम हुनेछौं। हामी यी स्टिकरहरू अमेजनमा थोरै पैसाका लागि किन्न सक्छौं (लिङ्क) र हामीसँग सबै प्रकारका डिजाइन र रंगहरू छन्। हाम्रो आईफोनसँग उपयुक्त हुन तिनीहरूसँग कुनै विशेष प्रकारको विशेषकरणको आवश्यक पर्दैन। XR र XS का सबै आईफोनहरूमा यी कार्डहरू नेटिभ पढ्ने क्षमता छ। पुरानो मोडेलहरूलाई एनएफसी ट्याग पढ्ने अनुप्रयोग आवश्यक पर्दछ, जस्तै सुरूवात केन्द्र प्रो (लिङ्क).
एउटा हामीसँग स्टिकरहरू छन्, हाम्रो आईफोन र एप्लिकेसन मार्फत «सर्टकटहरू» हामी सबै प्रकारको अटोमेसनहरू सिर्जना गर्न सक्छौं जुन हामी चलाउन सक्छौं हाम्रो आईफोनलाई एनएफसी ट्यागको नजिक ल्याएर जुन हामीले कन्फिगर गरेका छौं।। मात्र आवश्यकता यो छ कि हाम्रो आईफोन अनलक हुनु पर्छ, यदि होईन भने यसले कुनै कार्य कार्यान्वयन गर्दैन। «सर्टकट» उपकरणले हामीलाई विकल्पहरूको एक बहुमत प्रदान गर्दछ, जस्तै सर्तहरू सिर्जना गर्ने, महिनाको मिति वा हप्ताको दिन अनुसार कार्य अनुकूलित गर्ने, आदि। यो एक धेरै शक्तिशाली उपकरण हो जुन केही मिनेटहरू खर्च गर्न लायकको छ जुन यसले हामीलाई प्रदान गर्दछ। भिडियोमा हामी वर्णन गर्दछौं कि कसरी काम गर्ने भन्ने कुरालाई साधारण उदाहरणले तपाईंलाई तपाईंलाई के गर्न सक्दछ भनेर एक विचार प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। के तपाइँ तपाइँका विचारहरू साझा गर्न चाहानुहुन्छ? ठीक छ, टिप्पणीहरूमा तपाइँसँग यो गर्न सही ठाउँ छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS 13 » एनएफसी ट्यागहरूको साथ होमकिट कसरी नियन्त्रण गर्ने
कुन संस्करण? बेटा बेटा छैन 13.2
NFC १.13.2.२ मा देखा पर्दैन
Justan लाई जवाफ दिनुहोस्
म तपाईंको प्रतिक्रिया संग अपडेट गरिएको जानकारी छ। स्पष्ट रूपमा केवल आईफोन XR र XS पछि मात्र नेटिभ गर्न सक्छन्। अघिल्लो आईफोन्सलाई सुरूवात केन्द्र प्रो अनुप्रयोग आवश्यक पर्दछ।
आईओएसको नयाँ संस्करणको साथ तपाईं होमपडमा खेल्नको लागि चरणहरू सरल गर्नुहुन्छ किनकि होमपड एक सहायकको रूपमा सक्षम गरिएको छ र एयरप्ले प्रयोग नगरीएको छ।
एउटा प्रश्न: के स्टीकर अर्को आईफोनको लागि मान्य छ? मेरो पत्नी को उदाहरण को लागी? मेरो मतलब यो हो कि यदि मैले यसलाई बैठक कोठामा बत्तीहरू खोल्नको लागि कन्फिगर गरें, यदि मेरी श्रीमतीले उनको फोन नजिक ल्याएमा, के उज्यालो पनि सकृय हुन्छ?
तपाईंले आफ्नो आईफोनमा उहि अटोमेसन सिर्जना गर्नुपर्नेछ
धेरै धेरै धन्यवाद! अभिवादन
एनरिक आर। भन्यो
नमस्कार, परामर्श। यदि तपाईं आईफोनबाट एनएफसी स्टिकरमा सर्टकट सिर्जना गर्नुहुन्छ भने, तपाईं पनि यसलाई एप्पल वाचलाई नजिक ल्याएर सक्रिय पार्न सक्नुहुन्छ? धन्यवाद,
Enrique आर लाई जवाफ दिनुहोस्।
म जुआन भन्यो
पुरानो टेक्नोलोजी .. आईफोन फ्यानहरूको लागि नयाँ खेलौना
यो जुआनलाई जवाफ दिनुहोस्
ह्युगो रिवेरा भन्यो
नमस्कार, मसँग आईफोन have छ र शोर्टकुट्सको अंशमा जब म एउटा स्वचालित गर्न चाहन्छु, NFC विकल्प देखा पर्दैन जस्तो देखिन्छ यो मेरो आईफोन ११ मा देखा पर्दछ। के मैले त्यसलाई सक्रिय गर्नु पर्छ? कसैलाई थाहा छ? धन्यवाद
ह्युगो रिवेरा लाई जवाफ दिनुहोस्
एप्पलले एप्पल टिभीको वार्षिक सदस्यता १० युरो छुटको साथ सुरू गर्दछ